သိထားသင့်တဲ့ စမတ်နည်းပညာ လှည့်ကွက် (၁၀) ခု
Developer တွေက နေ့စဉ်သုံးနေကျ gadget တွေမှာ လျှို့ဝှက်ချက်၊ shortcut နဲ့ လှည့်ကွက်တွေ ထည့်ထားပါတယ်။ နှစ်သစ်မှာ နည်းပညာနဲ့ ပိုမို ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေဖို့ သိထားသင့်တဲ့ လှည့်ကွက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) iPhone ကို လှည့်ကွက်သစ်တစ်ခု သင်ပေးခြင်း
iOS 14 ကြောင့် iPhone မှာ back tap gesture အတွက် command အသစ်တွေပါဝင်လာပါတယ်။ အဲဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖွင့်ထားချိန်မှာ ဖုန်းက back ခလုတ်နှိပ်ပုံ မူတည်ပြီး tap တွေကို အသုံးပြုနိုင်ပါမယ်။ အခု လုပ်ဆောင်ချက်က screen ကို lock လုပ်တာထက် ပိုတဲ့အရာတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သုံးစွဲသူက Wallet app ဖွင့်ဖို့ gesture အသစ်ကို ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
Back tap တွေကိုတော့ iPhone 8 နဲ့အထက် iOS 14 သွင်းထားတဲ့ဖုန်းတွေမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
၁. iPhone ပေါ်က Settings ကိုနှိပ်ပြီး Accessibility ကိုနှိပ်ပါ
၂. Touch ကိုနှိပ်ပါ
၃. အောက်ခြေအထိ scroll လုပ်ပြီး Back Tap ကိုရွေးချယ်ပါ
၄. Double Tap ဒါမှမဟုတ် Triple Tap ကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ back tap နှစ်ခုကို အသုံးပြုလို့ရအောင်လည်း ရွေးလို့ရပါတယ်
နေ့စဉ် Zoom လုပ်တဲ့အခါ စိတ်လန်းဆန်းစေဖို့ Touch Up My Appearance ကိုဖွင့်လို့ရပါတယ်။
၁. Desktop ပေါ်က Zoom ကိုဖွင့်ပြီး profile picture ပေါ်နှိပ်ပါ။ Settings ကိုနှိပ်ပါ
၂. Video tab ကိုနှိပ်ပါ
၃. Touch Up My Appearance ကိုနှိပ်ပေးပါ
၄. အပြောင်းအလဲဖြစ်ဖို့ slider ကိုဖွင့်ထားပါ။ နောက်တစ်ကြိမ် log in ဝင်တဲ့အခါလည်း မှတ်မိနေပါလိမ့်မယ်။
iOS မှာလည်း Touch Up my Appearance ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
၁. Zoom app ထဲက Settings ကိုသွားပါ
၂. Meetings ကိုနှိပ်ပါ
၃. Touch up my appearance ကိုနှိပ်ပါ
၄. ဗီဒီယိုနဲ့အတူ touch-up ပြ၊ မပြ ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။
(၃) ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုက အသံတွေကောင်းအောင် ပြုလုပ်နည်း
Krisp app ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုထဲက ဆူညံသံတွေကို ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ နည်းလမ်းကတော့-
၁. Krisp app ကို download လုပ်ပြီး account တစ်ခုဖန်တီးပါ
၂. Zoom ဖွင့်ပြီး Settings ကိုသွားပါ
၃. Audio settings ဖွင့်ပြီး အောက်ခြေက မိုက်ကရိုဖုန်းနဲ့ စပီကာအတွက် Krisp ကိုရွေးချယ်ပေးပါ
၄. Krisp app ထဲမှာ အသုံးပြုလိုတဲ့ မိုက်ကရိုနဲ့ စပီကာကို ရွေးချယ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ
Krisp ကိုတော့ Skype, Google Meet နဲ့ Microsoft Teams တို့နဲ့လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
(၄) App တွေကို ကန့်သတ်နည်း
Apple က iOS 14 ထဲမှာ ကင်မရာ ဒါမှမဟုတ် မိုက်ကရိုဖုန်း အသုံးပြုနေတဲ့ပုံစံကို သုံးစွဲသူတွေကို သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအညွှန်း icon ကတော့ privacy ထောက်ပံ့မှုတစ်ခုပါ။ Android 11 မှာတော့ အလားတူ လုပ်ဆောင်ချက် မပါပေမယ့် Access Dots app အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ App ကို install လုပ်ပြီးတာနဲ့ မိုက်အသုံးပြုနေရင် လိမ္မော်ရောင် icon ဒါမှဟုတ် ကင်မရာ အသုံးပြုနေရင် အစိမ်းရောင် icon ကိုတွေ့ရပါမယ်။
(၅) သီချင်းကို အလွယ်တကူ mute လုပ်နည်း
အခြား tab တစ်ခုမှာ သီချင်းဖွင့်ထားရင် အလွယ်တကူ mute လုပ်လို့ရတဲ့ နည်းရှိပါတယ်။ Google Chrome မှာ သီချင်းဖွင့်ထားတဲ့ tab တစ်ခုပေါ်မှာ right-click နှိပ်လိုက်ပြီး Must site ကိုနှိပ်လိုက်ရုံပဲ။ Microsoft Edge မှာတော့ ပိုမိုရိုးရှင်းပြီး စပီကာ icon ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ Safari လည်းအလားတူပါပဲ။
(၆) ဖိုင်ဟောင်းကို ရှင်းလင်းနည်း
စာသားတစ်ခုကို ကူးယူတဲ့အခါမှာ မရှုပ်အောင် လုပ်ပေးမယ့် နည်းလမ်းရှိပါတယ်။ ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ Ctrl+Shift+V ဒါမှမဟုတ် Mac ပေါ်မှာ Option+CMD+ Shift+ V နှိပ်ရပါမယ်။ အဲဒီအခါ ကူးယူထားတဲ့ စာသားတွေကို paste လုပ်ပေးပြီး အရင်က format လုပ်ထားတာကို ဖယ်ပေးပါတယ်။
(၇) Text replacement အသုံးပြုနည်း
Text replacement လုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ ရှည်လျားတဲ့ စကားစု “Good morning!” အတွက် “GM” ဆိုပြီး shortcut နဲ့အစားထိုးပါတယ်။ အလွန်အသုံးဝင်ပါတယ်။
· Settings > General > Keyboard > Text Replacement သွားပါ
· အပေါင်းလက္ခဏာ icon ကိုနှိပ်ပြီး စကားစုနဲ့ shortcut ထည့်ပြီး save လုပ်ပေးရပါမယ်
· Gboard ရဲ့ Settings > Dictionary > Personal dictionary နဲ့ ဘာသာစကားကို ရွေးချယ်ပေးရပါမယ်
· ပြီးရင်တော့ အပေါင်းလက္ခဏာ icon ကိုနှိပ်ပြီး စကားစု ဒါမှမဟုတ် စကားလုံး ရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်
(၈) လျှို့ဝှက် scroll
Windows 10 နဲ့ macOS ပေါ်က web browser တွေမှာ အသုံးပြုလို့ရတဲ့ လှည့်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သုံးစွဲသူက browser မှာ spacebar ကိုနှိပ်လိုက်ရင် အောက်ဆင်းသွားပြီး Shift+ spacebar ကိုနှိပ်ရင်တော့ အပေါ်ပြန်တက်သွားပါမယ်။
(၉) iOS နဲ့ Android က သတိပေးချက်တွေ ထိန်းချုပ်နည်း
iOS ပေါ်မှာ အသစ်ဝင်လာတဲ့ သတိပေးချက် နှိပ်ထားရင် windows တစ်ခု ဝင်လာပါမယ်။ အဲဒီမှာ သုံးစွဲသူက app အတွက် settings ပြောင်းဖို့ အစက် ၃ စက် icon ကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်။
Android မှာတော့ သတိပေးချက်ကို နှိပ်ထားပြီး Settings ကို tap လုပ်ပေးရပါမယ်။ သုံးစွဲသူက သတိပေးချက် ပိတ်တာ ဒါမှမဟုတ် သတိပေးချက် အသေးစိတ်ကို ကြည့်ဖို့ Advanced ကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်။
(၁၀) Dark Mode ဖွင့်နည်း
ညဘက် ဖုန်းကြည့်တဲ့အခါ မျက်လုံးသက်သာစေဖို့ Android 11 မှာတော့ Dark theme ပါဝင်လာပါတယ်။ ဘယ်လို set up လုပ်ရမလဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁. Quick Settings menu မြင်ရဖို့ Swipe down လုပ်ပါ
၂. Dark Theme icon ဖိနှိပ်ထားပါတယ်။ ပုံစံက လခြမ်းပုံလေးနဲ့ပါ
၃. အဲဒီမှာ အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ သတ်မှတ်ပေးတဲ့ “None” “Turn on from sunset to sunrise” နဲ့ “Turns on at custom time” ကိုတွေ့ရပါမယ်။
၄. “Turns on at custom time ကိုရွေးချယ်လိုရင် Dark Theme အလိုအလျောက် စတင်မယ့် အချိန်နဲ့ ဆုံးမယ့်အချိန်ကို ရွေးပေးပါတယ်။